Paolo Hospital Myanmar - Paolo Hospital
Thailand : (+661) 387 1000
Viber : +6685 046 4683
Line ID : MMS – Paolo
International insurance : (+66) 95 552 0337
Social Media – Follow Me !
 Facebook Myanmar
Pol.Lt.Col. Jirantanin Rattanavarinchai
Arthroplasty & Bone Joint Medicine
Dr. Prinya Sakiyaluk
Bundit Suntornlekla, MD. FRCS
Sasiluk Thangsombat , M.D.
Niphon Srisuwanunt, M.D.
Paoloဆေးရုံသည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေသောခေတ်မီအဆင့်မြင့်ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ဆေးရုံမှ နှလုံးသို့အထောက်အပံ့ပေးသောသွေးကြောများကို ကြီးမားသောခွဲစိတ်စရာမလိုပဲ၊ အထူးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သော အရေပြားဖောက်ရုံနည်းလမ်းများဖြင့်ကုသပေးနိုင်သည်။
Paolo ဆေးရုံသည်နှလုံးနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါများအတွက် ခေတ်မှီအဆင့်မြင့် ရောဂါရှာဖွေသည့်နည်းလမ်းများနှင့် ကုသပေးခြင်းဖြင့် နာမည်ကြီးနှလုံးကုသမှုဌာနတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံပြည့်ဝသောဆရာဝန်၊ သူနာပြုဆရာမနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူတကွအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲစိတ်ခန်း၊ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လူနာခန်းများကို ခေတ်မီသော အဆင့်မြင့်စက်ကိရိယာများနှင့်ပြည့်စုံစွာတပ်ဆင်ထားပါသည်။ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများကိုသက်သောင့်သက်သာနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်ပေးနိုင်သောလိုအပ်သည့်ဆေးကုသမှုများကိုပေးနိုင်စေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
နှလုံးခွဲစိတ်ခန်းများတွင်ခေတ်မီ၍လိုအပ်သော အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် လူနာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်သေချာအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
နှလုံးအတွင်းပြွန်ချောင်းသွင်း၍ရောဂါရှာခြင်း (Cardiac Catheterization)
သွေးကြောအတွင်းဆေးသွင်း၍ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း (Cardiac Surgery)
Dr. Nipon Srisuwanant
Dr. Tasanapong Skawattananont
သွေးကင်ဆာဆိုတာ? (What is blood cancer?)
သွေးကင်ဆာဆိုသည်မှာလူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးဆဲလ်များထုတ်လုပ်ခြင်းအားချို့ ယွင်းစေခြင်းဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီအတွင်းမှ စတင်ပါတယ်။သွေးဆဲလ်မျာတွင် သွေးဖြူဥ ၊သွေးနီဥနှင့် သွေးဥမွှားဆိုပြီးပုံစံသုးံမျိုးရှိပါတယ်။ သွေးကင်ဆာအများစုဟာပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးဆဲလ်များအလွန်အမင်းများပြားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့မှာ ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သောရောဂါကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခြင်း ၊ သွေးတိတ်ခြင်းများတွင် ချို့ယွင်းစေပြီးသွေးကင်ဆာဆဲလ်များဖြင့် ရပ်တည်နေပါတော့တယ်။
Leukemia ဆိုတဲ့ သွေးကင်ဆာအမျိုးအစားကတော့ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးတွေ့ ရှိရသောသွေးကင်ဆာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးဖြူဥများအလွန်အမင်းများပြားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းပုံမှန်မဟုတ်သော သွေးဖြူဥများမှ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီနှင့် သွေးနီဥထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအားတိုက်ခိုက်ပျက်ယွင်းစေပါတော့တယ်။
Lymphoma ဆိုတဲ့ သွေးကင်ဆာအမျိုးအစားကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ပြန်ရည်ကြောအဖွဲ့ အစည်းအားပျက်ယွင်းစေခြင်းဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကမလိုလားအပ်သော အရည်အမြောက်အမြားထွက်လာခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်လာသောအခါ Lymphocytes ဟုခေါ်သောသွေးဆဲလ်များသည် အရေအတွက်မျာပြားလာပြီးကင်ဆာဆဲလ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကာ ခန္ဓာကိုယ်၏ခုခံအားစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ချို့ ယွင်းစေပါတော့တယ်။
Dr. Harin Srijudnu
Dr. Arkom Cheirsilpa
Dr. Ekachai Visetsiri
SPECIALISTS ONCOLOGY surgery
+6661387 1000 (Thai)
Consult Doctor (Free!)